PressReader - Isolezwe: 2018-02-15 - Izinsolo zenkohlakalo ‘kwewine’ ithenda
Izinsolo zenkohlakalo ‘kwewine’ ithenda
SEKUQUBUKE izinsolo ezithi kunenkampani ehambe izikhangisa ukuthi isiwine ithenda yokuhlela Ugu Jazz Festival yize ukufakwa kwezicelo zokuhlela lo mcimbi kuvalwa ngoFebhuwari 16.
U-Ugu Jazz Festival wumcimbi we-jazz oba sePort Shepstone njalo ngoJuni.
Abanikazi bezinkampani ezifuna ukuhlela lo mcimbi babhalele uMasipala Ugu nakwiSolezwe bekhala ngokuthi kukhona inkampani esithole “incwadi esho ukuthi isiqokiwe” yize besalinde imiphumela yezicelo.
Abanikazi balezi zinkampani baveze ukuthi umnikazi wale nkampani yaseThekwini ukhuluma nabaxhasi ubatshela ukuthi uzodinga ukuthi bamseke ngoba usewutholile umsebenzi wokuhlela lo mcimbi.
Isolezwe lithole ukuthi phakathi kwezinto ezibhekwayo ezinkampanini ezifake izicelo umsebenzi wukuthi ngezasoGwini yini. Lokho kubalulekile njengoba umasipala ufuna ukuthuthukisa osomabhizinisi bendawo udale namathuba omsebenzi endaweni.
UMnuz Trevor Khanyile ongumkhulumeli kaMasipala Ugu osabambile, uthe bayitholile incwadi enezinsolo ezivezwa yiSolezwe futhi bayacela noma ngubani onobufakazi ngazo eze kubona noma ashayele inombolo yokubika inkohlakalo kumasipala.
“Imenenja kamasipala ayikaze isayine incwadi yokuqoka inkampani ezohlela Ugu Jazz futhi uma kukhona onaleyo ncwadi kufanele abikwe ngoba yinkohlakalo leyo. Ayikho inkampani esiqokiwe ukuba yenze Ugu Jazz. Ukufaka izicelo zokuhlela umcimbi kuvalwa ngoFebhuwari 16 ngo-12 emini. Uma sekuvaliwe sizophinde sibize bonke abafake izicelo ukubazisa ngokuqhubekayo,” kusho uKhanyile.
Ebuzwa ukuthi ngabe le thenda ivulelekile yini nasezinkampani ezingaphandle kukaMasipala Ugu, uthe ivuleleke kuwo wonke umuntu.